Ric Flair dia niresaka tamin'ny fomba ofisialy ny famotsorana azy tamin'ny WWE - Wwe
Ric Flair dia niresaka tamin'ny fomba ofisialy ny famotsorana azy tamin'ny WWE
Raha ny tatitra omaly dia navotsotr'i WWE i Ric Flair. Nanamafy izany tamin'ny fomba ofisialy ny orinasa tamin'ny alàlan'ny sioka iray androany. Ny Nature Boy mihitsy izao dia efa niresaka ny fialany tamin'ny famoahana fanambarana tao amin'ny Twitter. Toy izao no voalaza ao amin'ny fanambarana:
'Afaka mamaly amin'ny fomba ofisialy ny gazety rehetra mifandraika amin'ny famoahana ny fangatahana avy amin'ny WWE, izay nomeny ahy aho,' 'hoy ny nosoratan'i Flair. 'Te hampiharihary amin'ny olona rehetra aho fa tsy sosotra amin'ny WWE mihitsy aho. Izy ireo irery no tompon'andraikitra amin'ny fametrahana ahy amin'ny toerana misy ny fiainana izay misy ahy ankehitriny, izay ahitako ny hazavana mazava indrindra. Manana fomba fijery hafa ho an'ny hoaviko aho. Iriko tsy misy na inona na inona izy ireo fa fahombiazana mitohy! Misaotra anao amin'ny rehetra! Tsy misy afa-tsy ny fanajana! '
- Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 3 aogositra 2021
Ilay tompon-daka eran'izao tontolo izao 16 fotoana dia toa nisaraka tamin'ny WWE tamin'ny lafiny tsara. Hatramin'izao nanoratanay izao dia mbola tsy nisy fanamafisana ofisialy ny antony nahatonga ny fivoahan'ny Flair. Araka ny tatitra vao haingana avy amin'ny Fightful Select, ny fangatahan'i Flair dia avy amin'ny fanapahan-kevitra momba ny famandrihana vao haingana izay nahasosotra azy. Saingy nisy tatitra iray hafa nilaza fa ny famotsorana dia ny fanapaha-kevitr'i Vince McMahon.
Ny fisehoana farany vitsivitsy nataon'i WW Flair tamin'ny WWE dia tsy hay hadinoina
Ric Flair ao amin'ny WrestleMania 24
Talohan'ny nidirany tao amin'ny WWE, Ric Flair dia iray amin'ireo anarana lehibe indrindra tamin'ny tolona matihanina. Ny fankafizany tsy manam-petra sy ny fahaizany miavaka amin'ny peratra dia nahazo fiderana lehibe avy amin'ireo mpihaino tolona manerantany. Ny faharetan'ny asany dia nanamafy ny lovany, rehefa nitolona am-polony taona maro izy.
Ny lalao WWE farany nataon'ny Flair dia nifanandrina tamin'i Shawn Michaels tao amin'ny WrestleMania 24. Ity fihaonana goavana ity dia heverin'ny maro ho iray amin'ireo lalao lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny WrestleMania.
zavatra tsy ho vitan'ny mpifoka rongony mihitsy
Tamin'io taona io ihany dia niditra tao amin'ny Hall of Fame malaza WWE i Flair. Ity no fidirana voalohany nataony; izy dia lasa Hall of Famer WWE indroa tamin'ny 2012 niaraka tamin'ny Four Horsemen.
Na dia nisotro ronono taona maro lasa aza i Flair, indraindray, dia tafiditra tao anatin'ny lalan'ny WWE izy. Tamin'ny taon-dasa, izy dia ampahany lehibe tamin'ny fameloman'i Randy Orton ny toetran'ny 'The Legend Killer'. Ny hazakazaka WWE farany nataon'ny Flair dia nahitana ny zoro tantaram-pitiavany niaraka tamin'i Lacey Evans. Nofoanana ity tantara ity taorian'ny nanambaran'i Evans fa bevohoka izy.
Inona no ataonao amin'ny famotsorana an'i Flair WWE? Mizarà ny hevitrao ao amin'ny fizarana hevitra etsy ambany.
Efa nandinika Sportskeeda Wrestling tamin'ny Instagram ? Tsindrio eto raha te havaozina ianao!
ny fomba hahasambatra amin'ny fanambadiana tsy sambatra
maninona aho no malahelo olona be loatra
tsy miraharaha lehilahy mba hahatonga azy maniry anao
raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady
ny fomba hahatonga ny sipako ho be fitiavana kokoa
efitrano malaza bam bam bigelow